Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Maldives » Ku booqo Maldives Caawinta Websaydha Tallaalka
Jebinta Wararka Caalamka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Maldives • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Booqo Maldives waxay bilawday olole loogu tala galay in kor loogu qaado magaca meesha loo socdo ee suuqyada adduunka isla markaana loo xaqiijiyo dadka safarka ah in Maldives ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon ee loo safro xilligan.
Microsite cusub ayaa siisa dadka safarka ah macluumaad casri ah oo ku saabsan habka talaalka COVID-19 oo qayb ka ah ololaheeda ballaadhan ee "Waan tallaalayaa".
Microsite-ku wuxuu muujinayaa tirada shaqaalaha warshadaha dalxiiska ee la tallaalay waxayna siiyaan shaqaalaha dalxiiska macluumaad ku saabsan habka diiwaangelinta tallaalka iyo tilmaamaha HPA.
Waxay ku jiri doontaa cusbooneysiinta ololaha, iyo sidoo kale fiidiyowyo xayeysiis ah, sawirro, iyo sheekooyin.
Ololaha “Waan tallaalayaa” ujeeddadiisuna tahay in lagu hubiyo Maldives inay tahay qaybtii ugu horreysay ee si buuxda looga tallaalo dalxiiska adduunka. Iyada oo ay weheliso abuuritaanka juquraafi ahaaneed ee jasiiradaha oo bixiya kala fogaansho jireed oo dabiici ah, iyo tallaabooyinka adag ee caafimaadka iyo nabadgelyada ee jira, waaxda dalxiiska oo si buuxda loo tallaalay waxay noqon doontaa faa'iido dheeraad ah oo lagu dhiirrigelinayo dalxiisayaasha inay booqdaan halka loo socdo.
Intaas waxaa sii dheer, ololuhu wuxuu sidoo kale u xaqiijinayaa safarleyda ka kala imanaya adduunka oo dhan dadaalka baaxadda leh iyo maalgashiga lagu hubinayo nabadgelyada dadka maxalliga ah iyo socotada caalamiga ah ee ku nool badweynta Hindiya
Mudane Madaxweynaha dalka Mudane Ibrahim Mohamed Solih ayaa bilaabay ololaha COVID-19 Dhifaau 1-dii Febraayo 2021, ujeedkuna wuxuu ahaa in la siiyo talaal bilaash ah COVID-19 dhamaan muwaadiniinta iyo dadka degan dalka. Laga soo bilaabo Juun 23, 2021, boqolkiiba 96 ee shaqaalaha dalxiiska ayaa helay qiyaasta ugu horreysa ee tallaalka, halka 70 boqolkiiba shaqaalaha dalxiiska ay si buuxda u tallaalan yihiin.
Intii lagu guda jiray Abriil 2021, Booqo Maldives oo kaashaneysa Wasaaradda Dalxiiska ayaa bilaabay ololaha “Waan tallaalayaa” si loola wadaago farriinta togan ee la xiriirta tallaalka shaqaalaha ka shaqeeya waaxda dalxiiska, iyo sidoo kale in la dhiirrigeliyo dadaallada la qaadayo si loo hubiyo Maldives wali waxay kamid tahay meelaha ugu nabdoon safarada.